के तपाईं बेरोजगार हुनुहुन्छ? घरमै बसीबसी श्रीयाेगले यसरी दिनेछ जागिर खाने अवसर – सेयर गराैं – PathivaraOnline
Home > समाचार > के तपाईं बेरोजगार हुनुहुन्छ? घरमै बसीबसी श्रीयाेगले यसरी दिनेछ जागिर खाने अवसर – सेयर गराैं
admin January 30, 2019 January 30, 2019 समाचार	0
काठमाडौं- के तपाईं बेरोजगार हुनुहुन्छ ? श्रीयोग डटकममा आफूलाई सूचिकृत गराउनुस । तपाईंलाई रोजगारीको अबसर आउन थाल्ने छ । छनौटको अबसर तपाईसँगै हुनेछ । कुन काम गर्ने, कुन नगर्ने । बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरेर श्रीयोगले नयाँ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसमा विभिन्न पेशासँग मिल्ने योग्यता बनाउने ब्यक्तिहरुले आफ्नो नाम, सम्पर्क नम्बर तथा ठेगाना लिस्टिङ्ग गराउन सक्नेछन् ।
फुर्सदको समयलाई राम्रो कुरामा ब्यतित गर्दा समयको सदुपयोग साथै पैसा पनि कमाइ हुने हुन्छ। यो सानो प्रयासले देशमा विद्यमान वेरोजगारी समस्यालाई धेरै हदसम्म कम गर्ने भएकाले यो कार्य सामाजिक सेवाकै एक पहल हो । श्रीयोग डटकम पूर्ण रुपमा पार्ट टाइम काम गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो जुन नयाँ कन्सेप्टको आधारमा बनाइएको छ।
विभिन्न ७८ समूहमा स्थान अनुसार काम गर्ने, या भनौ सेवा दिने व्यक्तिहरुको सानो विवरण रखिएको हुन्छ र जसले त्यस्तो काम गर्ने या भनौ सेवा दिने व्यक्तिहरुलाई खोजि रहनु भएको छ भने त्यस्तो कामदार खोज्ने व्यक्ति र काम लगाउने व्यक्तिलाइ वेबसाइट,मोबाइल याप्स र कल सेन्टरको माध्यमबाट जोड्ने काम गर्दछ ।
हरेक कुरा गुगलमा भेटिदैन, न फेसबुकमा न लिन्कडिनमावा अरु कुनै ठाउँमा , सानो भन्दा सानो कामले पनि रोजगारीको अवसर प्रदान गर्छ अनि त्यो रोजगारीले आम्दानीको स्रोत साथै काममा अझै दक्ष बनाउछ । थोरै शब्दमा भन्ने हो भने , हामी काम खोज्ने र काम गर्ने मान्छेलाई सजिलै सँग जोडिदिने काम गर्छाैं ।
बिराटनगरमा रहेका राम जी (काल्पनिक नाम) प्लम्बिङको काम गर्नु हुन्छ , अनि बिराटनगरमा नै घर भएको श्याम बस्नेत (काल्पनिक नाम)को घरमा प्लम्बर चहिएको हुन्छ, त्यो बेला कहाँ कसरी खोज्ने, अनि कुन प्लम्बर कस्तो लेभल को हो, के कस्तो रिभ्यु छ, थाहा पाउन मुस्किल हुन्छ । यस् वेबसाइट, मोबाइल याप्समा प्लम्बरहरु जस्तै हाम्रो दैनिक जीवनमा काम लाग्ने प्रायः सबै दक्ष जनशक्तिहरुको नेपाल भरिको बिवरण रखिएको छ ।
काम गर्ने सीप भएका, कुनै तालिम लिएका, कामको खोजीमा अलमलिएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने छँदैछ, श्रीयोगले विदेशमा बस्नेहरुलाई समेत सीपअनुसार काम खोज्ने प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँने बताएको छ । श्रीयोगले ५० मुख्य सहरहरुमा १०० समूहमा १०० व्यक्तिहरुको विवरण राखेर पाँच लाख व्यक्तिहरुलाई आंशिक समय रोजगारी दिने योजना बनाएको श्रीयोगका संस्थापक प्रकाश उप्रेतीले बताए । उनले भने, सीप भएका तथा काम गर्न चाहने व्यक्तिहरुको सीपको पहिचान गरी उनीहरुलाई सही ठाँउमा र्पुयाई कामको अवसर प्रदान गर्छौ ।
अचानक पेट दुख्यो भन्दै अस्पताल पुगेकि महिलाको रिपोर्ट देखेर डाक्टर समेत चकित परे (भिडियो हेर्नुस्)